आफ्नै सन्तानको दवावले अन्धकार बन्दैछ घर
एक दिन नार्कोनन् नेपालमा मलाई भेट्न एक दम्पत्ति आउनु भयो । आफ्नो सन्तान दिन प्रतिदिन पातलो हुँदै गएपछि चिन्तित भएका अभिभावक उहाँले त्यसको कारण पत्ता लगाउन मलाई सम्पर्क गर्नुभएको थियो । मसंग भेट्ने पहिल्यै तय भएका कारण मैले आउँदा छोराको पिसाव लिएर आउन अनुरोध गरेको थिएँ । उहाँले पिसाव लिएर आउनु भएको थियो, पिसाव जाँच गर्दा छोराले गाँजा खाएको प्रष्ट देखियो । more...
ड्रग्सको कुरा ग¥यो कि दुःखैको कुरो मात्र आउँछ । देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म म जहाँ पुग्छु त्यहाँ ड्रग्सले रुवाएका परिवार भेट्छु । नेपालगञ्जमा कार्यक्रम गरिरहेको बेलामा एक महिला रुदै मेरो छेउँमा आउनुभयो र सयांै मानिसहरुको भिड्मा ह्वाँ ह्वाँ रुदै दुव्र्यसनमा परेको छोराले आफुलाई कुटेर घरबाट निकालेको सत्य कथा सुनाउनु भयो । more...
कहिले बन्ला ड्रग्सको सरकारी उपचार केन्द्र ?
दिनहुँ मेरो भेट ड्रग्सको समस्यामा परेका परिवारसँग हुने गर्दछ । यस क्रममा म सँधै अकल्पनीय दुःखहरु सुन्ने गर्दछु । यसै हप्ता पनि गाउँको जस्तो देखिने एक महिला मलाई भेट्न आउनु भयो । उहाँको अनुहार देख्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो की उहाँ ज्यादै ठूलो तनावमा हुनुहुन्छ । ती महिलाको घर दोलखाको कुनै गाउँमा रहेछ । जब मैले उहाँलाई म के सहयोग गर्न सक्छु ? more...